Kukhona izifo eziningi ezibulalayo ezingase zidlulele ngegazi. Ukuze kuncishiswe ingozi yokutheleleka kwezokwelapha waqala ukusebenzisa ithuluzi ukuzisika akuwona nommese zalutho. Le divayisi kuhlinzwa esiye sathatha indawo Lancet, futhi manje ngenkuthalo esetshenziswa odokotela abahlinzayo emhlabeni wonke. Njengoba ngosizo ukuhlinza kwenziwe, bese nalokho bayanda izidingo.
Lokhu instrument kuhlinzwa kubhekwa isibalo esisodwa phakathi amadivaysi ezokwelapha ezifanayo futhi limelela ummese ezincane, okuyinto eyenziwa nge ukusikeka umzimba womuntu izicubu zomzimba ezithambile. Kungaba hhayi kuphela eyodwa, kodwa futhi esebenza. grade yezokwelapha insimbi engagqwali, enokumelana okusezingeni eliphezulu ukugqwala isetshenziselwa yokukhiqiza lakamuva.
Instruments kungase kwehluke ngaphezu doping eziyinkimbinkimbi noma chromium okuqukethwe lenyuke. Umehluko ingahle isakhiwo. scalpels Steel ngokuyisisekelo ukwenza egoqekayo, ukuze ukwazi ukufaka insingo entsha ngaphandle regrinding.
Yiziphi izinhlobo scalpels khona?
amathuluzi anjalo yezokwelapha kungaba zinhlobo ezilandelayo:
ingaphakathi umzimba - une-blade okusaqanda ukuthi iloliwe e a umkhumbi, futhi isibambo eside;
bryushistye - babe ukuma arcuate noma sigudluke ravnovygnutoy ukusika ebusweni;
wakhomba - Uyi blade esika nhlangothi zombili esime i arc, emaphethelweni ezimbili ukusika izingxenye maqondana phezulu ikhaba ngokulinganayo;
Microsurgical - elinesimo blade mncane, ephethe isilinganiso esithile ikhaba yokwehlisa kanye ingalo obuphelele;
nommese obucayi - amathuluzi okuhlinza yalolu hlobo kufanele blade emincane futhi iDemo;
resection - abe ucezu olugobile we emaweni cutting edge;
ukunqunywa - blade obuphelele ngokuhlobene ububanzi mncane impela. Futhi iyatholakala ku kudoti blade.
nommese kuhlinzwa Oyinyumba, kanye anatomically aguqulelwe imikhuba jikelele kuhlinzwa angase abe nobubanzi ezahlukene kanye nobude. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba ihambisane nezidingo ezidingekile ukusebenza kanye Ergonomics wezinsimbi zomculo kuhlinzwa, ngesikhathi esifanayo ukuze bafeze imisebenzi ezikhethekile, ezifana ekuhlinzeni ezingane lapho indawo kuhlinzwa incane ngoba yemizimba amancane ngosayizi umzimba wengane.
nommese Steel alahlwayo futhi esebenza isicelo izinqubo ezihlukahlukene zokwelapha.
scalpels besisu kuhlinzwa asetshenziselwa ukusebenza amanxeba ajulile.
Nge bryushistogo ukusebenzisa sebeziqhumbuza engajulile futhi isikhathi eside amanoni, muscle and isikhumba nezicubu. Iphinde isetshenziselwe ngokuba asike izidumbu zabantu we imisebenzi uqwanga, amalunga nemisipha, njengoba kudinga ezinye umzamo ukusingatha nasentanyeni insimbi. Isetshenziselwa imisebenzi ngokuhlanganyela kanye jikelele kuhlinzwa.
scalpels ezicijile ezisetshenziselwa imisebenzi eyenziwa ezindaweni ezidinga izicubu wokubhoboza - isikhumba, imisipha, zezinzwa, okunamafutha, lwamafinyila kanye lubhoboze izindonga kwezitho eziyize ezifana isinye, ingemuva, nabanye. Nge ithuluzi ezifana bophezela sebeziqhumbuza esincane kodwa ejulile.
scalpels Microsurgical esetshenziselwa ukuhlinzwa otorhinolaryngological, imithambo yegazi, amehlo kanye yezimonyo, ezidinga ukubulawa eqondile kakhulu ukusikeka.
izindwani Ngokucophelela kuhlinzwa esetshenziselwa imisebenzi zamehlo, plastic kanye nokuhlinzwa maxillofacial, ngoba Urology futhi izinqubo zamazinyo.
Ukusika izicubu obukhulu ezifana uqwanga, imisipha, periosteum, egobolondweni lelunga, resection esetshenziswa scalpels.
Steel ukunqunywa amathuluzi esetshenziselwa esitho umlenze, kanye nokulungiselela kwezicubu lapho wafunda komzimba womuntu namakhono kuhlinzwa kwentiwa.
Indaba kusukela okwakwenza nommese kuhlinzwa?
Steel - okokusebenza eziyisisekelo kusuka okwenza leli thuluzi. nommese esebenza is ezenziwe ngensimbi engagqwali Medical. izindwani alahlwayo ukumelana ophakeme ukugqwala nikchemu ngokuphelele, ngakho ukwenza lukhuni chromium steel zabo by UKWAKHA abandayo.
scalpels esebenza aqukethe esiningi chromium. amathuluzi Blade ukuthi zenzelwe nokuhlinza amehlo, ekhiqizwa kusuka Ceramic noma isafire futhi stellite kokuba obukhulu idayimane enamathela.
On the "nommese smart" ukuhlinzwa
Okusanda zokwelapha laqanjwa idivayisi entsha, okungase kwachazwa ngokuthi "nommese smart '. It uyakwazi ukuhlaziya umusi womuzi wenyukela ngesikhathi ukusika noma cauterizing izicubu we eziqhutshwa ummese electrosurgical. Njengoba ithuluzi odokotela uyakwazi phakathi nokuhlinzwa ukucacisa khona izicubu isuswe isimila cells.
Nommese Steel: Intengo
Izindleko zalesi ithuluzi wezokwelapha incike injongo yawo. Eshibhe ummese alahlwayo kubiza ruble angu-8, futhi kuyabiza kakhulu, bryushisty yokumlandela ruble 445. Ungathenga kubo Pharmacy noma ezitolo of kwemishini yezokwelapha.
Scalpels - amathuluzi okuhlinza senzelwe imisebenzi. Ukusebenzisa lezi sebeziqhumbuza lwenziwa izitho ezihlukahlukene nezicubu zomzimba womuntu. Kukhona alahlwayo futhi esebenza. Noma yimuphi isikhungo sezokwelapha ifakwe leli thuluzi, okuyinto abakhethiwe ngokuhambisana umsebenzi inhlangano enjalo.
Kagesi imisipha ingqondo. Amadivayisi ngoba electrostimulation imisipha
Ukuhlinzwa Septoplasty - ke ... Septoplasty septum acinene
Kuphi futhi kanjani bahlolelwe igciwane lesandulela ngculazi ngokungaziwa
Amakhowe nge zucchini: zokupheka ngezithombe